महानायक काण्डको साइड इफेक्ट : ‘डाँडाको बरपिपल’ सुनसान, हलमा छैनन् दर्शक ! - Himali Patrika
महानायक काण्डको साइड इफेक्ट : ‘डाँडाको बरपिपल’ सुनसान, हलमा छैनन् दर्शक !
हिमाली पत्रिका २९ असोज २०७८, 7:46 am
किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो त कोरोनाको लहर केही शान्त भए पनि समाप्त भएको छैन । अहिले पनि मानिसहरु भिडभाडसँग डराइरहेका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्र वाध्यात्मक नभएकाले ‘रिस्क’ लिन कोही पनि चाहिरहेका छैनन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि दर्शक हलमा आएका छैनन् ।